Xisbiga Jamhuuriga oo Hillary Clinton u doortay musharrax iyo aragtida Obama | Berberanews.com
Home WARARKA Xisbiga Jamhuuriga oo Hillary Clinton u doortay musharrax iyo aragtida Obama
Philadelphia(Berberanews):- Hillary Clinton, ayaa Xisbiga Dimuquraaddigu si rasmi ah ugu magacaabay inay noqoto Musharraxa u tartama Xisbigaas doorashada Madaxtinnimada ee dalka Maraykanka, isagoo Madaxweyne Obama-na ugu baaqay Shacabka reer Maraykan inay codkooda siiyaan oo ay doortaan Hillary oo uu sheegay inay tahay qofka ugu habboon inay xilka kala wareegto
Waxay Cod-bixiyeyaasha reer Maraykan, gaar ahaan Xisbigeeda u sheegtay in wakhtiga doorashadu ay tahay wakhtiga qiimaynta, iyada oo taariikh xarriiqday markii ay aqbashay in ay noqoto magacaabidda Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka. Hadalkaasi waxay ka sheegtay Shirka Xisbiga Dimuquraaddiga ee ka qabsoomay magaalada Philadelphia ee dalka Maraykanka habeenkii Jimcaha, iyada oo noqotay Musharraxiii u horrayey ee Dumur ah ee uu soo magacaabo Xisbi wayn oo dalkaasi ka tirsan.
Waxaanay Sheegtay inay iyadoo ku faraxsan magacaabista la magacaabay ay aqbashay inay noqoto Murrashaxa sida rasmiga ah doorashada Madaxweynennimo ugu tartami doona Xisbigeeda Dimuqraadigga ah. Hillary Clinton oo ku baaqeysa in la midoobo, waxa ay hadal ku durtay Ninka ay is hayaan ee musharaxa Jamhuuriga, Donald Trump. Waxay ku tilmaamtay in uu u maleeyo in dhibaatada dalka oo dhan keligii xallin karo.
Hillary ayaa sheegtay in Donald Trump fikaradihiisu ay aad u khaldan yihiin, isla markaana aan lagu hoggaamin karin Shacabka Mareykanka. Waxa kale oo sheegtay in marka fikradihiisa loo eego Xisbiga uu ka tirsan yahay aanu jirin-ba. Waxay sheegtay in ay habboon tahay inay Shacabka Maraykanka qofkasta oo ka mid ah oo Xisbigeeda taageersani u codeeyo iyida marka loo dareero doorashada Madaxweyne-nimada Maraykanka dhammaadka sannadkan.
Waxa ay tilmaamtay in dadka Mareykanka oo sida wada-jir ah u shaqeeyaa ay mustaqbal wanaagsan u noqon karaan qofkasta. Mrs Clinton, waxa ay sidoo kale u mahad-celisay Taageerayaasheeda in Musharraxnimada ay ku tartameen doorashada hoose ee Dimuquraaddiga ee markay ka guulaysatay iyaguna iyada taageeray, gaar ahaan Xildhibaanka tartanka adag ay wada galeen ee Xisbigeeda Mr. Bernie Sanders. Waxaanay Hillary Clinton u xulatay Musharrax Madaxweyne Ku-xigeen inuu u noqdo ninka lagu magacaabo Tim Kaine.
Geesta kale, Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, ayaa sharraxay Sababta uu u maleynayo in Hillary Clinton ay mudan tahay in ay Xafiiska kala wareegto bisha Jannaayo ee sannadka 2017-ka, isaga oo sheegay inaanu jirin Nin ama Haweeney uga diyaarsan Hillary xilka Madaxtinnimada Maraykanka.
Khudbad uu Obama ka jeeday Shirweynaha guud ee Dimoqraaddiga ee ka socda magaalada Philadelphia ee dalka Maraykanka, ayuu ku sheegay in Hillary Clinton ay tahay qof aamminsan in waddanka uu wanaagsan yahay marka dadka midab-bada kala duwan ay isku yimaaddaan ee ay mid noqdaan.
“Sannadkan waxaan idin weydiisanayaa inaad igula soo biirtaan inaan iska diidno cabsi-gelinta, oo aan dooranno waxa noo wanaagsan oo ah in Hillary ay noqoto Madaxweynaha igu xiga ee Mareykanka.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweyne Obama.
Madaxweynaha Maraykanku waxa uu sheegay in Hillary ay haysato khibrad ku filan inay dalka ku hoggaamiso, si ka duwan Musharraxa Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump. Madaxweyne Obama waxa kale oo uu sheegay in Shirkii Jamhuuriga ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada Cleveland aan lagu soo bandhigin wax xal ah, hase-yeeshee uu ahaa cadho, eedayn iyo nacab.
Hoggaamiyaysasha ka hadlay Shirkaas, waxaa sidoo kale ka mid ahaa Madaxweyne Ku-xigeenka xilku kasii dhammaanayo Joe Biden, Saraakiil Ciidan oo Muslimiin ah oo shaaciyey inay taageersan yihiin Hillary Clinton oo ay u arkaan inuu ku jiro mustaqbalka Maraykankan midaysan, halka ay ka sheegeen in mustaqbal-xumada Maraykanku ku jirto haddii la doorto Donald Trump.
Previous articleXukuumada Somaliland iyo Bangiga Aduunka Nayroobi ku Kala Saxeexday Mashruuc ku kacaya Toban Milyan oo Doolar oo lagu Horumarinayo Tayada Shaqaalaha Dawlada.+ SAWIRRO
Next articleDablay Hubaysan oo Laascaanood ku toogtay Guddoomiyihii Shirkadda Telesom